Jesu Anoregerera Zvivi Zvemunhu Akaoma Nhengo Dzemuviri | Upenyu hwaJesu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Wallisian Waray-Waray
“Zvivi Zvako Zvakanganwirwa”
MATEU 9:1-8 MAKO 2:1-12 RUKA 5:17-26
JESU ANOREGERERA ZVIVI ZVEMUMWE MURUME AKAOMA NHENGO DZEMUVIRI UYE ANOMUPORESA
Vanhu vemunzvimbo dzakawanda vava kuziva nezvaJesu. Vamwe vanotoenda munzvimbo dzinonetsa kusvika kuti vazomunzwa achidzidzisa uye kuti vaone zvishamiso zvake. Zvisinei, pashure pemazuva, anodzokera kuKapenaume kunova ndiko kwaanonyanya kushandira. Shoko rokuti adzoka rinopararira muguta iri riri pedyo neGungwa reGarireya. Izvi zvinoita kuti vakawanda vauye pamba paari kugara. Vamwe vavo vaFarisi nevadzidzisi veMutemo vabva muGarireya mose nemuJudhiya yose, kusanganisira Jerusarema.
‘Vazhinji vaungana, zvokuti hapasisina nzvimbo, kunyange nepasuo, uye anotanga kuvataurira shoko.’ (Mako 2:2) Zvinozoitika ipapo zvinokanga mate mukanwa. Chiitiko chacho chinotibatsira kunzwisisa kuti Jesu ane simba rekubvisa chacho chinoita kuti vanhu vatambure uye oita kuti vanhu vaanosarudza vave neutano hwakanaka.
Jesu paari kudzidzisa ari muimba iyi yakati maku nevanhu, vamwe varume vana vanouya vakatakura murume akaoma nhengo dzemuviri ari pakamubhedha. Vanoda kuti Jesu aporese shamwari yavo. Asi nekuwanda kwakaita vanhu, vanotadza kusvika ‘naye pana Jesu chaipo.’ (Mako 2:4) Chimbofungidzira kuti izvi zvinovarwadza zvakadini. Saka vanokwira padenga remba vovhura panokwana kamubhedha kake vomudzikisa nepaburi iroro vachimupinza mumba.
Jesu anotsamwa here kuti vari kumukanganisa zvaari kuita? Kana! Anotoshamiswa nekutenda kwevarume ava obva ati kumurume akaoma nhengo dzemuviri: “Zvivi zvako zvakanganwirwa.” (Mateu 9:2) Asi Jesu angakwanisa kuregerera zvivi here? Vanyori nevaFarisi vanotoiita nyaya vachiti: “Munhu uyu ari kutaurirei saizvozvi? Ari kumhura. Ndiani angakanganwira zvivi kunze kwomumwe chete, iye Mwari?”—Mako 2:7.
Achiziva kuti ndizvo zvavari kufunga, Jesu anoti kwavari: “Muri kufungirei zvinhu izvi mumwoyo menyu? Ndezvipi zviri nyore, kuti kumunhu akaoma rutivi rwomuviri, ‘Zvivi zvako zvakanganwirwa,’ kana kuti, ‘Simuka, utore kamubhedha kako, ufambe’?” (Mako 2:8, 9) Zvichibva pachibayiro chaachazopa, Jesu anogona kukanganwira zvivi zvemurume uyu.
Zvadaro Jesu anoratidza vose varipo kusanganisira vaya vari kumushora kuti ane simba rekuregerera zvivi panyika. Anotendeukira kumurume akaoma nhengo dzemuviri oti: “Ndinoti kwauri, Simuka, tora kamubhedha kako, uende kumba kwako.” (Mako 2:11, 12) Murume wacho anobva angosimuka, obuda akatakura kamubhedha kake munhu wose achizviona. Vanhu vanoshamiswa nazvo! Vanokudza Mwari vachiti: “Hatina kumboona zvakadai”!—Mako 2:11, 12.
Zvakakosha kuti ticherechedze kuti zvakataurwa naJesu zvinoratidza kuti urwere hunokonzerwa nechivi uye kuti kukanganwirwa zvivi kunoita kuti munhu ave mutano. Bhaibheri rinodzidzisa kuti baba vedu vekutanga, Adhamu, vakaita chivi uye kuti tose tava kurwarawo nekufa zvichibva pachivi ichocho. Asi kana Umambo hwaMwari hwava kutonga, Jesu achakanganwira zvivi zvevaya vose vanoda Mwari uye vanomushumira. Zvadaro urwere huchabva hwabviswa nokusingaperi.—VaRoma 5:12, 18, 19.
Chii chinoita kuti Jesu aporese murume akaoma nhengo dzemuviri muKapenaume?
Murume wacho anosvika sei pana Jesu?
Chii chatingadzidza panhoroondo iyi nezvekubatana kwakaita chivi neurwere, uye izvi zvinoita kuti tive netariro yei?
Zvivi Zvedu Zvinogona Kuregererwa Here?
Mwari anokanganwira kunyange zvivi zvakakura here? Tinofanira kuitei kana tichida kufarirwa naMwari?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Zvivi Zvako Zvakanganwirwa”